baravanews, Author at - Page 13 of 14 | Page 13
You are here: Home / Author Archives: baravanews (page 13)
Maxkamada ciidamada oo xukun ku riday rag Beydhabo ku dilay Sheekh Maxamed Dheer
Maxkamada darrajada koowaad ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa subaxnimadii hore ee saakay xukuno isugu jira dil iyo xabsi daa’in ku riday Sedex dhalinyarro ah ku eedeysnaa in masjid ku yaala magaalada ku dhax toogteen todobaadkii hore wadaad lagu magacaabi jiray Sheekh Maxamed Deer.
Maxkamada oo maalintii shalay soo gabagabeysay dhageysiga kiiska dacwada loo heystay sadexda dhalinyarrada ah oo lagu soo eedeeyay in gudaha Masjidka ku dileen wadaadka, ayaa ugu danbeyntii, soo saartay xukun isugu jiray dil iyo xabsi daa’in.
Maxamed Aadan Cali Baroow/ Gacan ku dhiiglaha dilka lagu xukumay
Garsoorka Maxkamada ciidamada ayaa sheegay in Maxamed Aadan Cali Barrow oo ahaa ninkii gacantiisa ku dilay Sheekh Maxamed Deer lagu riday xukun dil ah halka Labada kale oo dilkan gacan ku siiyay iyana lagu riday xukun xabsi daa’in ah.
Maxkamada ayaa sheegtay in raggan eedeesanayaasha ahaa ay qirteen in Al -shabaab ka tirsanaayeen sidoo kale dilkaas ka dambeeyeen, waxaana gudoomiyaha maxkamada darrajada koowaad ee ciidamada uu saakay ku dhawaaqaay xukunka dilka ah iyo xabsi daa’in lagu riday labada kale oo lagu eedeeyay in ay caawiyeen.
Wasaaradda amniga oo sheegtay in la qabtay madaxii amniyeedka Al-shabaab ee gobolka Banaadir
Wasiirka wasaaradda Amniga dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Abuukar Isloow [Ducaale] ayaa sheegay in ciidamada xisilinta caasimada gacanta ku dhigeen madaxii amniyeedka Al-shabaab ee gobolka Banaadir, kaddib howlgal ay ka sameeyeen Suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Hay’adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la soo bandhigi doono darkaalkan ka tirsanaa Al-shabaab ee magaalada Muqdisho lagu qabtay.
Saraakiisha ciidamada NISA ayaa sheegay hawlgal qorsheysan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho in lagu beegsaday Sarkaalkan oo magaciisa lagu sheegay C/wahaab Khaliif Axmed, oo loo yaqaano Ciise Tarabuun.
Dowladda Soomaaliya ayaa sare u qaaday xaqiijinta ammaanka magaalada Muqdisho oo ciidamo la soo dhigay dhamaan Isgoysyada ku yaalla bartamaha caasimadda.
Al-shabaab oo madaafiic ku weeraray degmada Buulo-buurti ee gobolka Hiiraan ee dalka Somaaliya
Wararka ka imanaya degmada Buula-burte ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab waabarigii hore ee saakay madaafiic ku weerareen saldhiga ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ee degmada ku sugan.
Ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa dhinacooda ku jawaabay madaafiic iyo rasaas xooggan oo qalqal ku abuuray dadka ku dhaqan degmada.
Waxaa hawada ka maqnaa ilaa iyo saakay isgaarsiinta degmada, laakiin markii danbe ayaa dib loo fasaxay, waxaana dad aan la hadalnay inoo sheegeen in aysan ka war qabin khasaare ka dhashay madaafiicda lagu soo tuuray degmada.
Ciidamada Jabuuti iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku baxeen degaanno ku dhow magaalada oo lagu tuhunsanaa in Al-Shabab ay hoobiyayaasha ka soo tuureen.
Xoogagga Al-shabaab ayaa dhowr jeer oo hore weerar ku qaaday saldhigyada ciidamada Jabuuti ku leeyihiin garoonka diyaaradaha iyo duleedka Buulo Burte.
Degmada ayaa Afartii sano ee la soo dhaafay waxaa ay ku jirtay go’doon, iyadoo sahayda lagu gaarsiinayay diyaarado kuwo militariga ah, waloow waayadii ugu danbeeyay ay sii toos ah u tagayeen diyaaradaha rakaabka ah ee dadka rayidka ah isticmaalaan.
Ra’iisul Wasaaraha Somaaliya Kheyre oo booqday dadkii ku dhaawacmay weerarkii Pizza House ee Muqdisho
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre oo uu Weheliyo Wasiirka Qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga ah Jamaal Xassan ayaa booqday qaar ka mid ah dhaawacyadii ay wax yeellada ka soo gaartay weeararkii ugu danbeeyey ee Al-shabaab ay ka geysteen magaalada Muqdisho gaar ahaan Pizza House.
Dadka dhaawacyada qaba in isbitaalka yaalla ayaa waxaa ku jira iyo carruur iyo haweenka ka mid ahaa dadkii ay wax yeellada ka soo gaartay weerarkii Pizza House oo ay ku geeriyoodeen tiro ka badan 20 ruux iyo dhoor ruux ee ku dhaawacmeen.
Farmaajo “ Dadkii xalay la dilay waxaa ay ahaayeen dad shuhada ah oo bil soon ah la dilay, iyadoo lagu jiro 10-ka dambe ee Ramadan”
Khamiis, June, 15, 2017 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaayo, ayaa si kulul uga hadlay weerarkii xalay Al Shabaab ay ku qaadeen maqaayada Pizza House, ee ku taalla degmadda Hodan ee magaalladda Muqdishu.
“Goobtii ay xalay weerareen waa meel ay inta badan isugu yimaadaana dhallinyarada dugsiyada sare iyo jaamacadaha ee ay da’dooda u dhaxeyso 15 ilaa 25. Aan is waydiinno maxaa loo laynayaa dhallinyaradaas? Ma ciidan baa? Ma Dowladbaa? Jawaabtu waa maya. Waxaa loo laynayaa maxaad u faraxsantihiin. Maxay rajo dowladnimo idiin gashay. Maxaad fikirka xagjirka ah u qaadan la’dihiin!.
Dhinaca kale, Afhayeenka Wasaaradda amniga Somaliya Axmed Maxamed Maxamuud Carab,ayaa sheegay in dadka la dilay ay ku jireen 7 gabdhood oo dhallinyaro ahaa, kuwaasi oo ku sugnaa Hotelka weerarka ay ku qaadeen ururka Al -shabaab.
Mas’uuliyiinta DF Soomaliya oo la faray in mudo 14 cisho ah ku soo diiwaangaliyaan ilaaladooda
Arbaco, June, 14, 2017 – Wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda amniga Gudaha Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Isloow ayaa looga hadlay go’aannada ku saabsan sugidda amniga mas’uuliyiinta dowladda.
Wsiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Ducaale Isloow ayaa sheegay in muddo 14 cisho ah mas’uuliyiinta dowladda ku soo diiwaan geliyaan ilaaladooda gaarka ah.
Wasiirka ayaa sheegay in tani qeyb ka tahay go’aankii gollaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ee ku aadanaa sugitaanka amniga iyo xasalinta amniga Caasimadda, go’aankasi oo ku taariikheysnaa 11 May ee 2017.
Go’aanka golaha wasiirada faqradda 7-aad oo uu dhigan sidan “Waxaa laga mamnuucay dhammaan qof kasta oo ay ku jiraan mas’uuliyinta dowladda in magaalada Muqdisho aysan ku dhex-wadan karin ilaalo ka badan Afar askari iyo ugu badnaan Labo gaari, mana qaadan karaan qori ka wayn AK47”
Wasiirka ayaa u qabtay xildhibaannada Labada Aqal, xubnaha golaha wasiirada iyo dhammaan mas’uuliyiinta kale ee dowladda in muddo afar iyo toban maalmood (14) gudahooda ay ku soo diiwaan geliyaan ilaalada gaarka ah iyo hubka ay sitaan, waxayna diiwaan gelinta ka bilaabaneysaa xarunta hogaanka dambi baarista (CID)
Amarkan ka soo baxay wasaarrada amniga gudaha ayaa imanaya xili maalmihii ugu danbeeyay magaalada Muqdisho ka soconayeen howlgalo hub ka dhigis ah oo caasimada looga nadiifinayo hubka sharci darrada ah, waxaana howlgaladan ka qeybqaadanaya ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban, militariga, nabad-sugida iyo booliiska Soomaaaliyeed.
Wafdi uu horkacayay wasiiru-dowlaha arimaha dibada Qatar oo maanta tagay Muqdisho ee Somaliya
Axad, June, 11, 2017, – Waxaa magaalada Muqdisho maanta tagay wafdi sare oo ka socday dawladda Qatar kaasi oo madaxda dawladda Soomaaliya la kulmay.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wafdiga Qatar uu hoggaaminayo wasiiru dowlaha Arirma dibedda Suldaan Bin Sacad Al-Muraykhi waxaana la sheegayaa in uu la kulmay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre.
Toddobaadkii horena waxaa magaalada Muqdisho tagay sida laga soo xigtay ilo muhiim ah wafdi ka socday dowladda Sacuudiga sida laga soo xigtay safiirka dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga Daahir Max’uud Geelle.
Ma jiro wax faah faahin ah oo dhinaca dowladda ka soo baxaya oo ka hadlaya wafdiga maanta tagay magaalada Muqdisho.
Xukuumada Soomaaliya ayaa sheegtay in ay dhaxdhaxaad ka tahay khilaafka u dhexeeya labada dawladood, waxayna ku baaqday in nabadgelyo lagu dhammeeeyo khilaafadka.
Hasse ahaatee waxaa muuqata in ay hadda wajaheyso xaalad u eg labo daran mid dooro, iyada oo cadaadis ba’an kala kulmeysa dowladda Sacuudiga oo siweyn uga xumaatay go’aanka dowladda Soomaaliya
Wararkii Ugu Dambeeyey Duqeymo Cir Iyo Dhul Ah Oo Lagu Qaadey Deegaano Ka Tirsan Shabeelada Hoose
Wararka aan ka heleyno deegaano ku yaala Gobolka Shabeelada hoose ayaa sheegaya in howlgallo culus ay wadaan Ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Ciidamada midowga afrika ee AMISOM.
Howlgallada oo la qaadey saake aroortii ayaa Ciidamada is garabsanaya waxay la wareegeen degmooyinka kala ah Awdheegle, Bariire, Janaale, Sabiid, Caanoole iyo kuwo kale oo ay maamulayeen Maleeshiyada kooxda Alshabaab.
Deeganada qaar ayaa waxa ka socda dagaal culus oo dhex maraya Ciidamada xooga dalka iyo AMISOM oo isku dhinac ah iyo Kooxda Alshabaab, warar aan helnay ayaa ku waramaya in Ciidamada AMISOM ay adeegsanayaan rasaas culus oo laga rido Taagiyada ay wataan.
Deegaanada ku xeeran degmada Janaale ayaa wararku tilmaamayaan in lagu qaadey duqeymo diyaaradeed oo lala beegsadey saldhigyo iyo xarrumo ay maamulaan Alshabaab, hase ahaatee lama oga ilaa hadda khasaaraha ka dhashey.
Cabdiwali Gaas oo ku baaqay dagaal ka dhan ah Al-shabaab iyo Daacish
Jimco, June, 09, 2017 – Madaxweynaha dowlad Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-shabaab iyo Daacish kaddib dagaal culus oo habeen ka hore ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Bari oo ay ku dhinteen tiro badan oo ka tirsan ciidamada Puntland.
Waxaa uu madaxweyne Gaas ka tacsiyadeeyay geeridii askartii shalay lagu laayay dagaal ka dhacay deegaanka Af-Urur, halkaasoo xero ciidan oo ay lahaayeen ciidamada daraawiishta ay weerareen Al-Shabaab.
“Waxaan shacabka Puntland u sheegayaa meel kasta oo ay joogaan inay u diyaar garoobaan dagaal adag oo ka dhana ah burcad diimeedka ku soo duulay dhulkayaga”ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Cabdiwali Gaas ayaa sheegay in Puntland isaga filan tahay inay iska difaacaan kooxo uu sheegay in ay ku soo duulleen deeganada maamulkiisa.
Waxaa uu ugu baaqay dowladda federaalka iyo beesha caalamka in ay ku taageeraan Puntland dagaalka adag ee ay kula jirto argagixisada oo uu ula jeedo Al-shabaab iyo kooxaha sheegta in ay ka tirsan yihiin Daacish ee ka dagaalama Puntland
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay 61 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ku dileen dagaal ka dhacay deegaanka Af-urur, waxaana ay ku furteen saanad milateri oo ay ku jiraan gaadiid dagaal.
Hasse ahaatee sheegashada Al-shabaab waxaa beeniyay Puntland oo sheegtay in tiro intaa la eg oo ciidamo ah loogu dilin dagaalkii Af-Urur.
Ra’iisal wasaare Kheyre oo dibadbaxayaal ka hor sheegay wax qabadka dowladda mudadii ay jirtay
Axad, June, 04, 2017 – Ra’iisal wasaaraha xukuumada Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa kumannaan dadweyne ah oo isugu soo baxay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium faah faahin ka siiyay waxqabadka dowladda muddadii ay jirtay.
Dibadbaxa ayaa sidoo kale waxaa ka qeybgallay madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, wasiiro, xildhibaanno, mas’uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiil ciidan.
Ra’iisal wasaare Kheyre ayaa ugu horeyn uga mahadceliyey shacabka Soomaaliyeed taageerada ay dawladda u hayaan, waxaana uu tilmaamay in waajib ay tahay in bisha Ramadaan laga wada shaqeeyo danta guud ee dalka iyo dadka gaar ahaan sugidda amniga, horumarinta caddaalladda, la dagaalanka musuq-maasuqa iyo gar-gaarka dadka danyarta ah.
Ra’iisal wasaaraha ayaa soo hadal qaaday sida ay xukuumadiisa uga go’an tahay in caqabadaha jira looga gudbo iskaashi dhex mara guud ahaan hay’adaha dawladda iyo bulsho weynta Soomaaliyeed.
“Caqabadaha iyo dhibaatooyinka na horyaalla dawladda kaliyana wax kama qaban karto, waxaa loo baahan yahay in dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada doorkooda ka qaataan, gaar ahaan aqoonyahanadda, culimada, oday-dhaqameeyada, ururada samafalka, ganacsatada, haweenka iyo dhalinyarada, taas oo looga gudbi karo marka la hello midnimo, wadanino, wadashaqeyn iyo iskaashi dhex-mara dawladda iyo shacabkeeda’’
Qorshaha Xukuumadda saldhigga u ah mar uu ka hadlayay ra’iisal wasaaraha ayuu tilmamay in ay ka mid yihiin:
1)Kow- ka-guul-gaarista xasiloonida guud ee dalka, gaar ahaan sugidda amniga iyo la dagaalanka Al-shabaab.
“Wallow illaahey nooga roonaaday Abaarihii iyo dhibkii, balse casharka aan ka baranay Abaarta, wuxuu na tusayaa haddii aan isku tashano xukuumad iyo shacabba in aan ka hortagi karno aafooyinka Abaaruhu keenaan. Anagoo ka duulayna mowqifka ah in aan isku tashano, waxaa noo suurto-galay : In aan gaarsiino deeqaha gurmadka dalka oo dhan, mudadaas abaartu jirta waxaa la qeybiyey lacag dhan shan million oo dollar oo si hufan u gaaray dadka Soomaaliyeed.
Ra’iisul wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa sheegay in la wiiqay muddo kooban argagixisada, isagoona tilmaamay in la xakameeyey qaraxyadii iyo hubkii lagu sitay caasimadda.
“Howlgalkii ugu horeeyey ee la fuliyey waxaa lagu qabtay kooxo ka tirsan argagixisada iyo hub sharci darro ah oo loo adeegsan jiray gumaadka shacabka, waxaan ku guuleysanay in ciidamo badan xeryahoodii lagu celiyo, waxaan kaloo qaadnay jidgooyooyin sharci darro ah”ayuu yiri ra’iisal wasaare Kheyre.
Ugu danbeyn, ra’iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in mudadaa kooban ee ay jirtay xukuumadda uu dalku gaaray horumaro la taaban karo haddii ay tahay dhaqaalaha oo sara-u-kacay iyo hannaanka maaliyadda oo dib loo saxay, isla markaana la dardargeliyey kobcinta iyo maareynta ilaha dakhliga, taas oo dhalisay in uu sara u kaco dhakhliga dawladda, laguna guuleystay bixinta mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda.
Total Visit : 26039
Total Hits : 63566